Dowladda Ethiopia oo dhabarka u jeedisay khilaafka u dhexeeya Madaxda sare ee dowladda KMG. | JILYAALE_ONLINE
Dowladda Ethiopia oo dhabarka u jeedisay khilaafka u dhexeeya Madaxda sare ee dowladda KMG.
Dowladda Ethiopia oo mar kasta la socotay xaaladda Dowladda KMG iyo khilaafyada markaas soo wajaha ayaa haatan u muuqata mid aan dheg jalaq uu siineyn khilaafka xoogan ee u dhexeeya Madaxweyne C/llaahi Yuusuf Axmed iyo Ra’isul Wasaare Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde).
Markii uu khilaafku soo kala dhex galay C/llaahi Yuusuf iyo Cali Max’ed Geedi markiiba waxay Dowladda Ethiopia dadaal u gashay in ay khilaafkaasi soo kala dhex gasho, hase yeeshee khilaafka hadda taagan Dowladda Ethiopia weli kama hadlin, waxayna dad qaar ku micneeyeen in Ethiopia ay ka daashay Dowladdii ay ku soo dhistay Impagati.
Khilaafka labada mas’uul oo marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareeraya ayaa sii xoogeysay markii uu Ra’isul Wasaaruhu dib u soo magacaabay Boosaskii ay baneeyeen qaar ka mid ah Wasaaraddii Iscasilay, waxa uuna sheegay in uusan marnaba ka tagi doonin Xilka.
“C/llaahi marka ay iskhilaafaan dowladdiisa waxa uu si hoose ula hadlaa qaar ka mid ah Wasiirada oo uu ku yiraahdo iska casila xilka, taas oo ay ujeedadeedu tahay in uu baalasha ka rifo dowladda markaa jirta, balse taasi uma suuragelin waxaa soo baxay nin aan arrintaasi u jixin jixeen’ ayuu yiri mid ka mid ah xildhibaanada Baarlamaanka oo intaa sii raaciyey “Dowladda waxaa lagu qaybsaday qaab Qabiil ma ahan marka in faragelin la isku sameeyo”.
C/llaahi Dheere oo afhayeen u ah Odoyaasha Beelaha Hawiye ayaa waxa uu yiri “waxaa la gaaray xiligii uu C/llaahi Yuusuf iska tagi lahaa, la hel la hel waxaa ku xiga lawaa, marka waxaan leeyahay C/llaahi Yuusuf, Hawiye maanta hurdadii ayuu ka kacay, marnaba lagaa yeeli maayo nin ay ummaddaani nacday in aad ku qasabtid”.
Khilaafka u dhexeeya C/llaahi Yuusuf iyo Nuur Cadde ayaa u dhexeeya markii uu Nuur Cadde uu xilka ka qaaday Gudoomiyihii Gobolka Banaadir Max’ed Dheere, balse C/llaahi uu Wareegto kale dib ugu magacaabay Max’ed Dheere, taas oo uu si aad ah uga carooday Ra’isul Wasaare Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde) oo isagu sheegay in uusan dib dambe u soo laabaneyn Max’ed Dheere.
← Madaafiic Hoobiyeyaal ah oo lagu garaacey Madaxtooyada & Garoonka magaalada Baydhabo.
Dowladda Mareykanka oo dooneysa in ay wada hadal la gasho Sheikh Xasan Daahir Aweys. →